Iindaba - Umnyhadala waseTshayina weNtwasahlobo ukufuphi kakhulu, uJohan noJason babhabha apha bevela e-Australia
Umnyhadala waseTshayina weNtwasahlobo ukufuphi kakhulu, uJohan noJason babhabha apha bevela e-Australia
Umnyhadala waseTshayina weNtwasahlobo ukufuphi kakhulu, uJohan noJason babhabha apha bevela e-Australia. Ihlobo lase-Australia ngoku, banxibe isikipa esifutshane ngaphakathi kwebhatyi yabo ejiyileyo. Basizisela isipho esishushu, yiprojekthi enkulu!
Ngexesha leentsuku ezintathu ezixakekileyo zihlala apha, saxoxa nzulu malunga neprojekthi enkulu, injineli yethu yazisa ngenkqubo yethu yokuwelda kunye nokwenza izinto, yabonisa abathengisi bethu kunye noomatshini kubandakanya umatshini wethu omtsha owenziwe ngokutsha wale projekthi, wakhankanya inkqubo ephambili kunye neeparameter eziphambili . Ukuqonda kwethu okufanelekileyo kweprojekthi kwenza ukuba umxhasi wethu akhululeke kwaye aneliseke. Ingxoxo ihambe kakuhle kakhulu, yeyomgodi omkhulu eOstreliya, siza kwenza amagubu amaninzi omazibuthe ukubuyisela ezonakeleyo.
Igubu leMagnetic yenye yeemveliso eziqhelekileyo zikaStamina, isetyenziswa kwishishini lezemigodi, iroli enkulu eneemagnethi ezomeleleyo kuyo, kunzima kakhulu kwaye kuyingozi ukudibanisa iimagnethi, ngethamsanqa sinamava amaninzi kuyo. Inkqubo yethu yokuwelda kunye nokuchwetheza ikhulile kakhulu, umsebenzi wethu wendibano kunye neemagnethi ezinkulu ezingama-2000 zisebenza kakuhle kwaye zisemgangathweni.
Isivumelwano sasayinwa kusuku nje olunye phambi komhla womnyhadala waseTshayina, omabini amaqela ayonwabile kwaye onwabile, yonke imibuzo isonjululwe kwaye yonke ingxaki yobuchwephesha yoyisiwe. UJohan noJason bazithembile kakhulu kuthi, iStamina ibonelele ngeentlobo ezininzi zeemveliso kubo iminyaka emininzi, ngexabiso eliphantsi kunye nomgangatho ophezulu. Bakholelwa ukuba uStamina uza kwenza umsebenzi olungileyo kule projekthi, nangona inzima ngenene.
Unyaka we-2020 ubonakala ngathi ngunyaka okhethekileyo kuthi, abasebenzi bethu baqale iholide yethu yasentwasahlobo ukusuka evekini yonyaka omtsha, sele kuhlwile, kodwa sonke sigcwele ukonwaba kunye nethemba. Ngapha koko, sisiqalo esihle.